Banyere Anyị - Otu INPVC
INPVC Edebanyela aha ụghalaahịa kemgbe 2020 maka ogige PVC (Polyvinyl Chloride) sitere na HAOYUAN PVC PLASTIC. Ọ na-agụnye nnukwu ezinụlọ nke ngwakọta dị njikere iji rụọ ọrụ na plasticized na granules siri ike nke emebere ma hazie maka ngwa dị iche iche. INPVC na -emepụta ma ọ bụ ngwakọta ọkọlọtọ ma ọ bụ na -emepụta ogige ndị ahaziri iche na -achọ, nke sitere na waya & eriri, eletriki & elektrọnik, ụlọ & ihe owuwu ruo ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ụlọ ọgwụ.
Anyị na -ebute ụzọ na teknụzụ nhazi PVC, na -etinye ihe karịrị afọ 27 nke ịdị mma n'ichepụta ọtụtụ ngwaahịa. Ụlọ ọrụ anyị ISO-9001 gbaara agbazi na-elekwasị anya na nchekwa, ịdị mma na akpaaka nke na-enye usoro na nhazi kacha mma, n'ụdị ntụ ntụ na ngwakọta.
Nke kachasị mkpa, anyị na-aga n'ihu na-emepe ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi iji meziwanye nkwado. A na -emepụta ngwaahịa anyị niile na usoro kachasị mma na -eso ogo, ahụike na nchekwa. A na -akwado ogige ahụ na ihe mgbakwunye ya na asambodo RoHs, REACH na FDA.
N'ilekwasị anya na ihe ọhụrụ na R&D, INPVC dị njikere imezu ihe na -agbanwe agbanwe nke ahịa ụwa. Ebe mmepe teknụzụ anyị na -enye anyị ohere ịzụlite usoro ahaziri iche dabere n'ụdị ngwa, usoro na njirimara igwe nke onye ahịa nrụpụta PVC anyị.
A na -enyocha granulu ndị emepụtara na ngalaba njikwa ịdị mma, na ụlọ nyocha njikwa mma anyị, nke nwere ihe nnwale siri ike, igwe ihe na -ekpo ọkụ, onye na -enyocha ihe siri ike, ihe mgbako njupụta polymer, ihe nrụpụta ụlọ nyocha, wdg, yabụ, ngwaahịa dị ka granules maka injection. a na -emepụta akụkụ, mkpụrụ ndụ ihe mkpuchi mmiri, mkpụrụ ndụ ihe ntụtụ, akụrụngwa ịdị ọcha na ndị ọzọ, dị ka ụkpụrụ nke ụbọchị ụwa si dị, a na -enyekwa ya ndị ahịa a na -akwanyere ùgwù.
Anyị kpebisiri ike iweta usoro iji bulie usoro, belata ọnụ ahịa ma melite akụrụngwa nke ngwaahịa ngwụcha PVC maka ndị ahịa anyị. Ebumnuche anyị bụ iwulite mmekọrịta na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị ahịa anyị. Onye ahịa ọ bụla ga-eritekwa uru site n'ọmụma anyị, ahụmịhe ogologo oge anyị na ọrụ anyị.
Ahụmịhe Nrụpụta Afọ 27
Ogwe ngwungwu PVC zuru oke
Onye otu ndị otu ụlọ ọrụ na -ahụ maka nrụpụta plastik China
Onye na-eweta ihe nhazi nhazi PVC otu-akwụsị
Onye nwe sistemụ nchịkwa ISO 9001 ISO9001
Laboratory ọkachamara nwere ngwa 65
Ndị otu R&D na nka na nka nwere ahụmịhe afọ 20
100% ihe amaghị nwoke 100%
ECO-enyi na enyi na REACH, asambodo RoHS
Nhọrọ Nkwakọ ngwaahịa dị iche iche
Ngwakọta PVC siri ike na nke dị nro dị
Ụdị ntụ ntụ na ogige dị
Nnwale nlele efu
Ọrụ Nka na ụzụ na -akwụghị ụgwọ
Nkwado nka na ụzụ ọkachamara
Ọrụ ịntanetị 24h
Ọrụ lọjistik nke ọma
Oge nnyefe ngwa ngwa
Usoro ịkwụ ụgwọ na -agbanwe agbanwe
Ịrịba ama mgbe-ire ọrụ
Otu NPVC, otu n'ime ndị na -emepụta China na ndị na -ebubata ngwakọta & ihe mgbakwunye maka ụlọ ọrụ Polyvinyl Chloride (PVC), nwere ndị enyemaka atọ.
Ntọala guzosiri ike na 1993, na -emepụta ogige PVC 100% na -amaghị nwoke siri ike & na -agbanwe agbanwe maka ọtụtụ ngwa site na iji ntụtụ, mwepụ na usoro nhazi ikuku.
Guzosiri ike na 2002, na-emepụta ma na-ere ihe mgbakwunye ihe mgbakwunye enyi na enyi na-enye arụmọrụ teknụzụ dị mma maka ụlọ ọrụ nhazi plastik PVC.
Guzosie ike na 2010, na -ebubata akụrụngwa akụrụngwa PVC ahaziri ahazi ma na -ebupu ngwa ahịa PVC ahaziri iche na ihe mgbakwunye n'ụwa niile